Uphengululo lweMibhobho yeGumbi lokuhlambela laseDelta
Ikhaya / Isikhokelo se-Faucet / Uphengululo lweMibhobho yaManzi yegumbi lokuhlambela i-Delta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 kwii-Delta zeBhafu yokuhlamba
2021 / 02 / 03 uhleloIsikhokelo se-Faucet 8437 0
Xa uqala ukujonga ekhaya, ubona isitayile kunye nomxholo. Nokuba ujonge ukubukeka okwangoku, okwe-rustic, ngokwesiko, okanye okwangoku, ikhaya lakho likunika i-vibe ethile xa ungena emnyango.
Xa ujonga ngokusondeleyo, nangona kunjalo, zonke iinkcukacha zidibanisa ukwenza isitayile sakho siphile. Iimpompo zakho ziphakathi kweenkcukacha ezibalulekileyo ekhitshini lakho, nakwindlu yakho yokuhlambela.
Njengoko ukhangela iifompo ezifanelekileyo, umgangatho ngumba ophambili ekuqwalaselweni kuba akukho mntu ufuna ukutshintsha iipompo zawo yonke iminyaka embalwa. Inkokheli enye ime ngaphezulu kwezinye xa kufikwa kumgangatho: Delta Faucet.
Izibonelelo zokuthenga iiMpompo zeDelta
I-Delta Faucet ihlala iphambili kwimveliso yetephu. Baye bavelisa iitekhnoloji ezinje ngeTouch2O, isivamvo sokuchukumisa esiguqula umbane kwaye ucime. Ikwayizingqondi emva kweMagnaTite Docking, esebenzisa iimagnethi ukukhusela intloko yentsimbi xa ungasebenzisi umbhobho owandisiweyo. Enye yeetekhnoloji zabo zokuyila nguH2I-Okinetic Technology, into entsha yeshawari egcina amanzi ngelixa isenza ukuba uzive ngathi wonwabela ishawa ephezulu.
Ngaphezulu kweempawu zabo ezizodwa, i-Delta Faucet idibanisa ulwakhiwo olukumgangatho ophezulu kunye newaranti esikelwe umda kuyo yonke imveliso yazo. Unokuqiniseka ukuba ufumana imveliso enkulu, kwaye ukuba kukho isiphako esinqabileyo esenzekayo, iDelta ikukhusele.
Ngekhathalogu ebanzi yeDelta Faucet, nangona kunjalo, uyazi njani ukuba zeziphi ezifanelekileyo ekhaya lakho? Masingene kwii-top zethu zeemveliso ze-Delta Faucet ekhitshini nakwindlu yangasese.
Iipompu zokuhlambela eziphezulu zeDelta
Igumbi lokuhlambela lakho yi-oasis apho unokuphumla wedwa, kodwa yonke into egumbini iya kuchaphazela ukuziva kunye nesitayile osenzileyo. Ukukhetha itepu elungileyo kukunika ukujonga okuthe tye ngelixa usenza amava ukuba agude kwaye kube lula ngokusemandleni. Ukuba uzingela loo mpompo ifanelekileyo, jonga ezona zikhethi zethu zintle ze-Delta.
1. Indlu yangasese yangoku yeHole engabodwa
Inkangeleko yanamhlanje imalunga nokucoceka, imigca ebushelelezi, kwaye yeyiphi imeko engcono ekuyo kwigumbi lokuhlambela ngaphandle kococeko? Uya kuba nobunzima ekufumaneni iimpompo ezininzi ngenkangeleko yale mihla kunale I-Faucet yangasese yeHole yangasese yangoku I-567LF-PP.
I-pop-up drain assembly ifakiwe
Umsebenzi wokubamba omnye
Olona phawu lubalulekileyo kule faucet inokuba kukusebenza kwesiphatho esinye. Kulula ukufumana ubushushu bamanzi obufunekayo obubalulekileyo xa uhlamba ubuso bakho ngokukodwa. Isiphatho esinye kulula ukusilawula ukuba izandla zakho zimdaka okanye uzama ukunceda abantwana bakho abancinci bahlambe izandla.
Le faucet ikwalungele ilebheli yeDelta WaterSense ngenxa yolondolozo lwamanzi. Iipompo zeWaterSense zisebenzisa malunga neepesenti ezingama-20 zamanzi ngaphantsi kweefompu eziqhelekileyo.
2. ILahara isasazeke ngokubanzi ithumbu lokuhlambela eline-3-Hole
ILahara iphakathi kwezona mpompo zithandwa kwigumbi lokuhlambela laseDelta, kwaye iza ngeendlela ezahlukeneyo. Kuxhomekeka kwisitayile osifunayo kunye noqwalaselo lwecomputer yakho okanye amampunge, i Lahara ebanzi 3-Hole Igumbi lokuhlambela ithumbu I-3538-CZMPU-DST inokuba ilungile ngokugqibeleleyo.
ITywina loTywina iTekhnoloji
Imigca yokubonelela nge-InnoFlex PEX
Iinketho ezine zokugqiba
Yenzelwe ukufakelwa kwemingxunya emithathu
Ukusebenza kwezibambo ezimbini
Uyilo oluqhelekileyo lukaLahara lufihlakele nakweyiphi na indawo yokuhlambela, efanelekileyo phantse nasiphi na isitayile sokuhombisa. Umgangatho uhlala uphambili kwi-Delta Faucet, nangona kunjalo, kwaye i-Lahara ayidanisi.
Le faucet inempawu ezikhethekileyo zedayimani kaDelta kunye neendlela zayo zokubonelela ze-InnoFlex PEX, zonke ziyilelwe ukuthintela ukuvuza nokunceda itephu yakho ihlale ixesha elide. Ngelixa le modeli iphantse yabotshelelwa kweyona faucet ibiza kakhulu kolu luhlu, lutyalo-mali onokulindela ukuba luhlale iminyaka emininzi.
3. Lahara Centreset Igumbi lokuhlambela
Uthandane nesitayile seLahara kodwa sele uyifakile i-countertop yakho yokuhlambela kwaye inesimo esimiselweyo semingxuma emithathu, hayi esasazekileyo. Awuphumanga kwithamsanqa, kuba iDelta inayo ILahara Centreset Igumbi lokuhlambela ngoManzi I-2538-CZMPU-DST kakhulu.
Le modeli yeziko inazo zonke iindlela zeLahara kunye neempawu ozaziyo kunye nothando kodwa ngoqwalaselo oluhambelana nokufakwa kwe-intshi ezine. I-Delta yenza ukuba ufakelo lungabinamthungo ngokubandakanya indibano ye-pop-up yokukhupha amanzi kunye neendlela ezihlanganisiweyo zonikezelo ngombhobho.
Ngelixa i-Delta's Diamond Seal Technology ingafani nale faucet, yinto ekufuneka uyithethile. Ivalve yokuchaneka ihlala ixesha elide kangangexesha elide njengezivalo ezisemgangathweni kwezinye iimpompo, ungalindela ukuba ukuthenga kwakho kuhlale ixesha elide.
4. Ifayilithi yeHaywood Centerset yegumbi lokuhlambela
Zonke iifompu ezikuluhlu lwethu ukuza kuthi ga ngoku bezikule ndawo ikuluhlu lwangoku okanye lwangoku. Ukuba ukhetha inkangeleko yesiko, i IHaywood Centerset Igumbi lokuhlambela I-Chrome 25999LF izakulunga kwi-alley yakho.
Iindlela ezintathu zokugqiba
IHaywood yahlukile ngeendlela ezininzi xa kuthelekiswa nezinye iimpompo zangasese zeDelta kuluhlu lwethu. Kubaqalayo, lolona khetho lwezoqoqosho lujikeleze iipesenti ezingama-25 zexabiso leemodeli zokugqibela zeLahara.
Ukongeza kwithegi yexabiso elinomtsalane, iHaywood yeyona imfutshane kuzo zonke iifompu ezikuluhlu lwethu. I-spout yayo iphakama nge-intshi ye-4.68 ngelixa ezinye iimodeli ziphantse zazi-intshi ezisixhenxe ubude.
Isitayile sesona sizathu siphambili sabanini bamakhaya abakhetha iHaywood, nangona kunjalo. Inenkangeleko yesiko ebandakanya ii-bulbs kunye nee-curves ezihambayo, ezenza ukuba zilungele igumbi lokuhlambela elinosapho olufudumeleyo okanye ukujonga okudala kwe-Hollywood.
5. Lahara Single Hole Igumbi lokuhlambela ithumbu
Kwigumbi lokuhlambela kwiindawo ezincinci okanye kumagumbi e-powder, ukufakwa komngxunya omnye kuqhelekile. Ukuba ucinga ukuba uthathe uLahara othandwayo ngaphandle kokuqwalaselwa kwigumbi lakho lokuhlambela, cinga kwakhona kwaye ujonge I-Lahara Single Hole Igumbi lokuhlambela I-538-CZMPU-DST.
Ilingana umngxuma omnye okanye imingxunya emithathu yokufaka
Njengoko unokulindela, le modeli luguqulelo olunemingxunya enye yezinye iimodeli zikaLahara. Ukusebenza ngokungafaniyo, ikwabandakanya ipleyiti yokuzikhethela ukuze uyisebenzise ukuba unofakelo olunemingxunya emithathu.
Kukho izinto ezimbalwa ezizodwa ekufuneka ziqwalaselwe ngale faucet ngokunjalo. Okokuqala, mde kunezinye iimodeli zikaLahara eziphantse zasi-intshi ezisixhenxe ubude. Qiniseka ukuba ulinganisa indawo yakho kwaye uqiniseke ukuba itompu iya kulunga.
Imodeli kaLahara inokhetho lokongeza iTouch2O ubuchwepheshe: Ukuyilwa kweDelta ekuvumela ukuba ucime kwaye ucime itepu ngokuthinta ingalo okanye ingqiniba. Kukulungele ukuhlamba izandla ezimdaka ngaphandle kokusasaza loo nto kumbhobho uqobo.
Ayinguye wonke umntu ofuna ukuba itephu yabo ibeyinxalenye ephambili yokujonga kwabo igumbi lokuhlambela. Ukuba ufuna esisiseko, esebenzayo, esemgangathweni webhobho, ungoyena mgqatswa ofanelekileyo Iziseko Faucet.
Ixabiso lentengo elingabizi
Amanzi afanelekileyo eManzi
Iinketho ezimbini zokugqiba
Isiseko sompompo asinakuba nayo nayiphi na into eyoyikisayo, kodwa ayifuni. Isitayile esilula sepompo kunye noyilo olumbumbulu luyenza ifaneleke nakweyiphi na indawo yokuhlambela, kwaye amaxabiso ayo afikelelekayo asisibonelelo ngokunjalo.
Ukulungiselela ukulungelwa kwakho, itephu yemipu iza ne-pop-up drain ebandakanyiweyo. Yenzelwe ukuba ilingane imingxunya emithathu, ufakelo lwee-intshi ezine kwaye iyafumaneka kuzo zombini i-chrome kunye ne-stainless ukuxhasa ukubonakala kwendlu yakho yangasese.
Ukukhetha i-Delta yakho yegumbi lokuhlambela
Awungekhe uhambe gwenxa ngombhobho wokuhlambela wase-Delta. Nokuba i-countertop yakho inomngxunya omnye, imingxunya emithathu evaliweyo, okanye ukumiliselwa kwemingxunya emithathu, kukho iindlela zokuhambelana neemfuno zakho kunye nesitayile sakho.
tagigumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela	Ngaphambili :: Ungazicoca njani iipompo zeKhitshi eMnyama eMnyama next: Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 seefayili zeDelta zasekhitshini
2021 / 02 / 03 12252
2021 / 01 / 27 6321